Izixhobo zoKongamela-Izixhobo zeCofttek
I-Luohe Hengfei Biological Technology Co, Ltd., eyafunyanwa ngo-2008, yinkampani ephezulu yezobuchwephesha yokuxuba imveliso yokudibanisa imveliso, iR & D kunye nentengiso. Ifumaneka eLuohe Chemical Industry Park, ezinikele kuphando kunye nophuhliso lweshishini eliphambili lezamayeza, ukubonelela ngeemveliso ezintsha kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kumzi mveliso wamayeza.
I-Hengfei Biotechnology ineqela lolawulo elinamava kunye neqela lokuqala le-R & D, kubandakanya iingcali ezininzi ezibalaseleyo kwicandelo lophuhliso lwenkqubo yokuxuba amayeza kunye nophando lomgangatho wamayeza. Iyaziwa kwaye inokhuphiswano olubalulekileyo kwezi nkalo zamachiza ekhemisi, itekhnoloji yokwenziwa, ukuphuculwa kweziyobisi, i-bioengineering, njl njl. kunye ne China.
Ngomdla wokubambisana nawe kwaye wenze impumelelo!